Shiinaha Shidaal Shidaal Shidaal Shidan leh Foornada Soosaaraha iyo Badeecada Dabka Dahabka
Cabir: 39.3x60.6x43 cm (bilaa biibiile)
Miisaanka: 18 kiilo
Qeexida Foornada gubta qoryaha
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd waxay diirada saareysaa soo saarida shooladda alwaaxa gubta iyo kuwa kale ee wax lagu kariyo ee looxa kaamamka ah laga isticmaalo mudo 15 sano ah gudaha Shiinaha. Soo bandhigida joogtada ah ee qalabka cusub iyo teknolojiyadda, oo leh hibada ugu wanaagsan ee horumarinta iyo cilmi baarista. Waxaan bixin karnaa ODM, adeegga OEM.
Burjikadeena Shidaalka adag ee lagu gubayo foornada oo leh kuleyliyaha waa kuleyl aad u fiican iyo xalka karinta ee teendhooyinka shiraacyada iswaafajiya iyo hoyga madadaalada ee kaladuwan, oo lagu sameeyay tayada 304 birta aan lahayn. Naqshadeynta buul-dhiska 4-lugood ah waxay siineysaa raad yar, ka dhigeysa shooladda shidaalka adag xulasho wanaagsan meelaha yar yar ee aagga kululeeyaha dabka leh loo isticmaalo si loo yareeyo nadiifinta loo baahan yahay.
Faahfaahinta Foornada gubaysa
Cabbirka badeecada: 39.3x60.6x43cm
Cabbirka kartoonka: 32x61.6x33cm, 1 pc / kartoon
Miisaanka: NW: 18KG GW: 20KG
Talooyin ku Saabsan Qalabka: Ku darida korantada wax lagu karsado, waxaan kugula talineynaa qabqable, qiiqa qiiqa, haanta biyaha, xirmada biligleynaya iyo gogosha dabka laga ilaaliyo. Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa inaad kordhiso waxtarka shooladda, si siman u kululaato dusha sare ee wax lagu karsado, waxayna ka ilaalisaa lakabka sare ee teendhada dhimbilo, ka hortagga khataraha nabadgelyada oo aad ugu fiicnaata dhalaalida barafka iyo barafka biyaha la cabbo, iyo marka kariyaha uu si hufan u gubanayo. taangigu wuxuu karkarin doonaa biyaha daqiiqado gudahood mahadnaq ahaan meesha uu ku yaalo dhabarka cooktop-ka iyo salka tuubada qiiqa oo kuleylka uu ku urursan yahay.
Hore: Teendhada Teendhada Birta ah ee 304 ahama
Xiga: Alaabada Cusub ee Kululaanta Teendhada Birta ah ee ahama leh BBQ iyo Foornada
Kululeeyaha shidaalka adag
qoryaha kariyaha leh foornada
kariyaha kaamka gubanaya
kariyaha xaabada leh ee foornada leh
Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Kaam Dabka Gubay, shooladda birta ah ee birta ah, Foornada Cuntada lagu karsado, Teendhada Qoryaha Teendhada,